मदन कोइराला	35 posts
मदन कोइराला डिसी नेपालका समाचार सम्पादक हुन्। उनी राजनीतिक विषयमा लेख्न रूची राख्छन्।
काठमाडौं। बुधबार साँझसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको थियो। विपी कोइरालापछि केपी ओलीले दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएका थिए। ओलीले एक वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व पनि गरे। तर अबदेखि वर्तमान सरकार बुहमतको मात्र भएको…
'पर्ख र हेर' को अवस्थामा राजपा
काठमाडौं। सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारको कामबाट खुशी छैन्। संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ता, आफ्ना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने शर्तसहित सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाको माग अहिलेसम्म…
ओली सरकारको एकवर्षः सुवास नेम्वाङको समीक्षा
काठमाडौं। आजकै दिन एक वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माणको जटिलताबीच ओलीले प्राप्त गरेको जनविश्वासको जगबाट उनको दल एमाले चुनावमा…
के उपेन्द्र यादव सरकार छाड्दैछन् ? ओलीसँग झन् झन् बढ्यो दूरी !
काठमाडौं। सत्ता साझेदार दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेकपाबीच दूरी बढेको छ। सरकारका काम कारवाही र निर्णय प्रकृयामा फोरमलाई उपेक्षित गरिएको भन्दै नेता उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट छन्। संविधान संशोधनलाई प्रकृयामा अगाडि बढाउने र सरकारका नीति…
मदन काेइराला काठमाडौं। भेनेजुयला प्रकरणको बाछिटाले यतिबेला नेपाली राजनीतिलाई पनि चिस्याएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा भित्र यो प्रकरणले उथलपुथल ल्यायो। पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको असमझदारी छचल्किएर सतहमा आएको प्रष्टै देखियो। पार्टीकै प्रभाव सरकारमा पनि पर्ने नै भयो। सरकारबाट आएको आधिकारिक विज्ञप्तिले…
डा. केसीको स्वास्थ्य झनै बिग्रियो, सरकारको वेवास्ता कायमै, कांग्रेसको पहल व्यर्थ
मदन काेइराला काठमाडौं। २४ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधार सम्बन्धमा आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै डा. केसी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आमरण अनशनमा छन्। संसदका दुवै सदनबाट…
राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीबीच शुक्रबार एकता घोषणा
काठमाडौं। पटक पटक विभाजित भएका पूर्व पञ्चका दुई पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) आज (शुक्रबार) एकता घोषणा हुने भएको छ। राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पुशपति शमशेर राणा र एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र…
सरकारमा गएको फोरम भन्दा सरकार बाहिरको राजपा बलियो !
२२ पौष २०७५
कामठाडौं। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विषेगरी मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित भए। मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित मात्रै भएनन् ६ महिनासम्म मुलुकका प्रमुख नाकामा धर्ना बसेर नाकाबन्दी नै गरे। संविधानमा मधेसका हक अधिकार, पहिचान र अन्य मधेसलाई विभेद…
वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रतिवेदनमा सांसद विभाजित, एउटै गल्तीको सजायमा पक्षपातको आरोप
काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनका विषयमा सांसदहरु विभाजित भएका छन् । आज जारी सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुले उपसमितिले पूर्वाग्रही भएर कारवाहीको सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन्। विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न…
संसदमा सरकारमाथि खनिए देउवा
११ पौष २०७५
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ। बुधबारदेखि संघिय संसदमा सुरु भएको तेस्रो हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै संसद…